Doorashada Saddex kursi oo maanta ka dhaceysa Hiiraan | KEYDMEDIA ENGLISH
Doorashada Saddex kursi oo maanta ka dhaceysa Hiiraan
Doorashada Saddex kursi oo ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa la filayaa in maanta lagu qabto, magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
BALADWEYE, Soomaaliya - Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka heer Federaal, ayaa fasaxay doorashada saddex kursi oo kala ah; HOP#010, HOP#030 & HOP#066, kuwaas oo hore loo hakiyey doorashadooda, kadib cabasho ka timid habraaca la maray.
Afhayeenka Guddiga heer Federaal, Ambassador Axmed Aadan Dagaal (Ahmed Safiina) oo xalay waqti dambe la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in la saxay khaladaad ka jiray habraaca Ergada sidaas awgeed Doorashada kuraastaas dib loo fasaxay.
Guddiga Doorashada Hirshabelle (SEIT) oo dhankooda hore u hakiyay doorashada saddexdaan kursi, ayaa shalay ku dhawaaqay in la fasaxay doorashada kuraasta, waxaana musharixiinta u tartamaya la guddoonsiiyay shahaadada tartanka.
Kuraastaan, waxaa hore ugu fadhiyay, Cabdirisaaq Axmed Maxamed (Jindi), oo matalayay HOP#010, Daahir Amiin Jeesow, oo ku fadhiyay HOP#030 iyo Cumar Cismaan Waasuge, oo HOP#066, matalayay, baarlamaankii 10-aad ee JFS.
Doorashada Saddexdaan kursi, ayaa maanta ka dhaceysa Baladweyne, Jeesow iyo Waasage, ayaa la filayaa in ay difaacdaan kuraastooda, halka, Jindi, oo dhawaan la sheegay in ilaaladiisu ku lug-yeesheen is rasaaseyn magaalada ka dhacday uusan qaadan shahaadada.
Qorshaha ayaa ahaa, in labadii maalin ee na-weydaartay, la qabto, doorashada 11 kursi oo ka mid ah kuraasta degaan doorashadoodu tahay xarunta gobolka Hiiraan, hayeeshee, kala aragti duwanaanta Guudlaawe iyo Dabageed, ayaa dib u dhigtay doorashada.